Zimbabwe Zimbabwe 2 - KYC360
Zimbabwean authorities arrested the wife of Vice President Constantino Chiwenga on charges of money laundering, fraud and violating exchange control regulations, the country’s anti Corruption Commission (ZACC) said on Sunday. Marry Mubaiwa was arrested on Saturday evening and will likely appear in court on Monday, ZACC spokesman John Makamure said. Read More
Zimbabwe’s former Vice-President Phelekezela Mphoko has been granted bail after appearing in court on corruption charges. This comes a day after anti-corruption officials said they were treating him as a fugitive. They accused him of driving away from a police station where he was supposed to make a statement on… Read More
Zimbabwean Tourism Minister Prisca Mupfumira was charged in court on Friday with corruption involving $95 million from the state pension fund after questioning by the newly formed Zimbabwe Anti-Corruption Commission (ZACC). Mupfumira is the first senior government official to be interrogated by the commission, which was appointed by President Emmerson… Read More
A former minister who served under Zimbabwe’s ex president Robert Mugabe was found guilty of corruption and sentenced to four years in jail on Friday, his lawyer said, the first conviction of a Mugabe-era official since he stepped down. Mugabe resigned in November after 37 years in power following a… Read More
Zimbabwe’s parliament on Monday backed down from its demand for former president Robert Mugabe to answer questions related to diamond mining operations during his time in office. In what would have been his first public appearance since being ousted in a de facto military coup in November, parliament had wanted… Read More
Zimbabwe’s parliament said on Monday that former President Robert Mugabe was scheduled to answer questions this week related to diamond mining operations during his tenure, but an official said senior ruling party politicians opposed this. Mugabe was originally scheduled to appear before the mines committee on May 9, which would… Read More
Zimbabwe’s central bank has stopped local banks from trading or processing payments linked to cryptocurrencies like bitcoin, its governor said on Monday, but stopped short of banning local cryptocurrency trading exchanges. In the southern African nation, those who trade in bitcoin say it offers rare protection as their bank deposits… Read More
Zimbabwe: Amnesty period for looters to return stolen millions
KYC360 News Zimbabwe’s newly appointed leader has announced a three-month grace period for individuals and firms to repatriate stolen money and assets. During the window period, respondents will not be asked any questions or face charges, however those who do not co-operate will be prosecuted. The government is aware that… Read More
Zimbabwe: Ex-Finance Minister held over corruption charges
27 November 2017 By Emelia Sithole-Matarise, REUTERS Ousted Zimbabwe finance minister Ignatius Chombo, charged with three counts of corruption in offences that allegedly took place two decades ago, was denied bail on Monday and will be detained in custody until his case is heard on Dec 8. Chombo, who faces… Read More